Allgedo.com » Madaxweyne Musefeni oo Qabanaya Kulan Deg Deg ah oo Looga Arinsanayo Saameynta Ay Yeelan Karto Shidaal Baarista Kenya (Warbixin)
Home » News » Madaxweyne Musefeni oo Qabanaya Kulan Deg Deg ah oo Looga Arinsanayo Saameynta Ay Yeelan Karto Shidaal Baarista Kenya (Warbixin) Print here| By: allgedo.com:
2 Jawaabood Nairobi (RBC) Ilo wareedyo ku dhow Midowga Afrika ayaa u xaqiijiyey Shabakada Raxanreeb in dawlada Uganda ay si weyn uga careysan tahay hindisaha Kenya ee ku wajahan shidaal baarista gudaha Soomaaliya kaasoo dawlada Uganda ay u aragto qorshe fashilin kara hawlgalka Amisom ee Soomaaliya. Akhri warbixin ku saabsan qorshaha Kenya.
Madaxweynaha dalka Ugaandha ee Museveni.
Danaha is diidan ee gobolka Ciidamada Kenya ee ka dagaalamaya Jubbada Hoose.
Qoraalkaan waxaa AOL usoo gudbiyay Bashir Mohamud, bashirmohamud@yahoo.com.
Madaxweyne Musefeni oo Qabanaya Kulan Deg Deg ah oo Looga Arinsanayo Saameynta Ay Yeelan Karto Shidaal Baarista Kenya (Warbixin) " calameyn says:	September 5, 2012 at 11:07 am	dhamaan waan idn salaameyaa walaayaal keenya iyo ugaandha waa isku hadaf waxaana ay ku heshiiyeen in ay dalka soomaaliyeed boobaan kheeyraatka dalka soomaaliyeed ugaandha iyo keyna iyo dhamaan dawladaha deriska la,ah soomaaliyeed waxaa damaca kaga jira kheyraatka dalka soomaaliyeed marka waxaa looga baahan yahay dadka soomaaliyeed in ay fahamaan hagardaamada ay wadaan dalalkan afrikaanta ah ee dalkeena ku soo duuley gaar ahaan dawladaha deriska nala ah waxaan soomaalida looga digeyaa in ay raacaan jidkii ay mareen dawaladahii hore sidaas aawgeeda waxaa loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo nabada iyo cadaalada iyo kala danbeynta iyo in la ilaaliyo xaquuda dadka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa kunool meelaha ay joogaan ciidamada dawlada iyo kuwa afrika
kismaayo says:	September 6, 2012 at 11:24 pm	Ninka maqaalkan qoray waxaad modaa nin caadhifad qabil ay ku jirto. Waxaan idin cadaynayaa inusan jirin qabiilo kismaayo ciidamo u dirsaday meeshuna ma aha meel lawada leeyahay. Walaalaha galgaduud iyo kuwa xiqdugu diley ee xamar iyo baydhabo ka soo qaylyaya waxaan oran laha ha ka waantobaan inay waxa ka socda jubooyinka iyo gedo ay soo fara gashadaan. Dadka ku dhaqan ayey u taal waxi laga yeeli badooda. Nin ku hadlaya afkii Sharif biijale iyo shariif sakiin iyo bare huuraale wax kama orankaro jubooyinka iyo gedo.